Sidee Isbitaallada loogu qeybiyay dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxii Ex Kontorol Afgooye? | HalQaran.com
Sidee Isbitaallada loogu qeybiyay dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxii Ex Kontorol Afgooye?
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxay faah faahin ka soo baxaysaa sida isbitaalada Magaalada Muqdisho loogu kala qaaday dadkii maanta ku waxyeeloobay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Galbeedka Magaalada Muqdisho.
Dhakhaatiirta caafimaadka ee ka hawlgasha Magaalada Muqdisho ayaa qaabilay dhibane-yaal la soo gaarsiiyay, iyagoona xilligan la tacaalaya dhaawacyadii la soo gaarsiiyay.
Dhibane-yaasha oo intooda badan la geeyay Isbitaalka Madiina ayaa waxay maamulku sheegeen in la soo gaarsiiyay meydadka 73 qof iyo dhaawacyada 52 kale,
Tirada dhimashada ayaa ah 77 qof, halka dhaawacuna uu sii caga-cageynayo 126 qof.
Dadka khasaaraha ugu badan uu weerarkaasi ka soo gaaray ayaa ah arday dhiganeysay Jaamacadda Banaadir ee Magaalada Muqdisho. Gaari ay la socdeen ayuu qaraxa ku qabsaday wadada.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyadda weerarkan, balse weerarada ceynkani oo kala ah ayaa waxaa aallaaba dusha u rita mintidiinta Al Shabaab.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxii Ex Kontorol Afgooye
sida isbitaalada loo geybiyay